MB 2017 Novambra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Suisse
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Novambra
Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra
Na dia iray amin'ireo foto-kevitro indrindra aza ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy miaiky aho fa sarotra ny mamantatra hoe tena misy tokoa izy io. Hatrany am-boalohany dia nokendren'Andriamanitra ho fanomezana malala-tanana izany, fihetsika lafo famelana heloka sy fampihavanana nataon'ny zanany lahy, izay faratampony no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatr'izany, tsy vitan'ny hoe navotsotra isika, averina - ampifanarahana amin'ilay Andriamanitra telo izay be fitiavana.
Ao amin'ny bokiny Sorompanavotana: Ilay olona sy asan'i Kristy, TF Torrance dia nanoratany toy izao manaraka izao: “Mila mitazona ny tanantsika isika satria tsy mahita teny mety hanakaiky ny dikan'ny hoe fampihavanana tsy manam-petra mandrakizay ». Ny zava-miafina ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asan'ny mpamorona be voninahitra - asa tena madio sy lehibe ka tsy takatsika tanteraka izany. Araka ny voalazan'ny Baiboly, ny haben'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asian'ny fitahiana mifandraika betsaka. Avelao ianao hanome fijery fohy momba ireo fanomezam-pahasoavana ireo.
1. Amin'ny famelan-keloka dia voavela ny fahotantsika
Ny ilana ny hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika dia manampy antsika hahatakatra ny maha-zava-dehibe an'Andriamanitra ny ota sy ny maha-zava-dehibe antsika koa ny mahita ny ota sy ny fahamelohana. Ny fahotantsika dia mamela hery iray hamongorana ny Zanak'Andriamanitra tenany ary handrava ny Andriamanitra telo izay iray raha afaka manao izany. Ny fahotantsika dia mitaky ny fidiran'ny Zanak'Andriamanitra mba handresena ny ratsy aterak'izany; Nanao izany izy tamin'ny nanolorany ny ainy ho antsika. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tsy mahita ny fahafatesan'i Jesosy ho famelan-keloka fotsiny isika fa zavatra "nomena" na "mety" - dia mitarika antsika amin'ny fanompoana an'i Kristy manetry tena sy lalina ary mitarika antsika amin'ny finoana voalohany mankasitraka fankasitrahana ary amin'ny farany dia hivavaka amin'ny fiainantsika manontolo.
Noho ny soron'i Jesosy dia voavela heloka tanteraka isika. Midika izany fa ny tsy rariny rehetra dia voafafan'ilay mpitsara tsy mitanila sy lavorary. Ny lainga rehetra dia fantatra sy resy - tsy manan-kery sy mahitsy ho famonjena antsika amin'ny alàlan'Andriamanitra. Aza hadino fotsiny io zava-misy mahafinaritra io. Tsy jamba ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra - ny mifanohitra amin'izany no izy. Tsy misy tsy jerena. Voaozona ary esorina ny ratsy ary voavonjy amin'ny vokany mahafaty isika ary nahazo fiainana vaovao. Fantatr'Andriamanitra ny pitsopitsony rehetra momba ny ota sy ny fomba manimba ny zavaboariny tsara. Fantany ny maharary anao sy ny olona tianao ny ota. Izy koa dia mijery any ankoatry ny ankehitriny ary mahita ny fiantraikan'ny ota sy ny fanimbana ny taranaka fahatelo sy fahefatra (ary avy eo!). Fantany ny hery sy ny halalin'ny ota; noho izany dia tiany isika hahatakatra sy hankafy ny hery sy ny halalin'ny famelana ny helony.
Ny famelan-keloka dia mamela antsika hahafantatra sy mahafantatra fa betsaka ny traikefa mihoatra noho izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Noho ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia afaka manantena ny hoavy be voninahitra nomanin'Andriamanitra ho antsika isika. Tsy navelany hisy hitranga izay tsy afaka manavotra, manavao ary mamerina ny asa fampihavanana. Ny lasa dia tsy manan-kery hamaritana ny ho avy izay nanokafan'Andriamanitra varavarana ho antsika, noho ny fampihavanana ny zanany malalany.
2. Amin’ny alalan’ny famelan-keloka no ihavanantsika amin’Andriamanitra
Fantatsika Andriamanitra ho Raintsika amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra, rahalahintsika sy mpisoronabe. Jesosy dia nanasa antsika hanatevin-daharana amin'ny adiresiny amin'Andriamanitra Ray sy hiresaka aminy amin'i Abba. Fampiasana tsiambaratelo ho an'ny dadany na dada malala izany. Nizara taminay taminay ny fahalalany ny fifandraisany tamin'ny rainy ary mitarika antsika akaikin'ny rainy izay tadiaviny amintsika.
Mba hitarika antsika ho amin’izany fahalalana izany dia nandefa ny Fanahy Masina ho antsika i Jesosy. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no ahafahantsika mahatsapa ny fitiavan’ny Ray ary manomboka miaina amin’ny maha-zanany malalany antsika. Ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia manantitrantitra ny fahambonian’ny asan’i Jesosy amin’izao lafiny izao: «Ny anjara fanompoan’i Jesosy dia ambony noho ny an’ny mpisoron’ny fanekena taloha, satria ambony ny fanekena izay maha Mpanalalana Azy ankehitriny. amin'ny taloha, satria naorina ho amin'ny teny fikasana tsara lavitra ... Fa hamindra fo amin'ny helony Aho, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany » (Heb. 8,6.12).
3. Manimba ny fahafatesana ny famelan-keloka
Ao anatin'ny tafatafa iray ho an'ny fandaharana ataonay You'r Included, ny zanak'avavavin'i TF Torrance, Robert Walker, dia nanondro fa ny porofon'ny famelan-kelokay dia ny famotehana ny ota sy ny fahafatesana, izay nohamafisina tamin'ny fitsanganan'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny maty dia hetsika lehibe indrindra. Tsy ny fitsanganana amin'ny maty fotsiny izany. Fiandohan'ny famoronana vaovao izany - fiandohan'ny fanavaozana ny fotoana sy ny habakabaka ... Ny fitsanganana amin'ny maty dia famelan-keloka. Tsy porofon'ny famelan-keloka fotsiny izany, fa famelan-keloka satria araka ny ota ao amin'ny Baiboly no miaraka. Noho izany, ny fandringanana ny ota dia midika koa ny fandringanana ny fahafatesana. Midika izany fa mamafa Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy maintsy hatsangana amin'ny maty ny olona iray mba hanala ny fahotantsika avy any am-pasana ka lasa antsika ny fitsanganana amin'ny maty. Koa afaka nanoratra toy izao i Paoly: "Fa raha tsy nitsangana Kristy, dia mbola ao amin'ny fahotanao ihany." ... Ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy fitsanganana amin'ny maty fotsiny; fa ny fiandohan'ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra.
4. Ny famelan-keloka dia mamerina ny fahatoniana
Miaraka amin'ny fifidianana antsika ho amin'ny famonjena, dia nifarana ny olana ara-filozofia hatry ny ela - Andriamanitra dia maniraka ny iray ho an'ny maro ary ny maro dia raisina ao amin'ny iray. Izany no antony nanoratan’ny apostoly Paoly an’i Timoty hoe: “Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanelanelana amin’Andriamanitra sy ny olona, ​​dia Kristy Jesosy, Izay olona, ​​izay nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny olona rehetra, ho fanambarana amin’ny fotoany. Izany no iandraiketan'ny mpitory sy ny Apostoly ... ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana »(1. Timoty 2,5- iray).
Ao amin’i Jesosy no tanteraka ny drafitr’Andriamanitra ho an’ny Isiraely sy ny olombelona rehetra. Mpanompo mahatoky an’ilay Andriamanitra tokana izy, mpisorona mpanjaka, iray ho an’ny maro, iray ho an’ny rehetra! Jesosy no Ilay nahatanteraka ny fikasan’Andriamanitra hitondra ny fahasoavana mamela heloka ho an’ny olona rehetra izay niaina hatramin’izay. Andriamanitra dia tsy manendry na mifidy an'Ilay handà ny be dia be, fa ny fomba hampandraisana anjara ny maro. Ao amin'ny fiarahamonin'ny famonjen'Andriamanitra, ny fifidianana dia tsy midika fa tsy maintsy misy ny fandavana an-kolaka. Raha ny marina dia ny filazan’i Jesosy irery ihany fa amin’ny alalany ihany no ahafahan’ny olona rehetra mihavana amin’Andriamanitra. Mariho ireto andininy manaraka ireto avy ao amin’ny Asan’ny Apostoly: “Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona ambanin’ny lanitra izay hahazoantsika famonjena.” ( Asan’ny Apostoly 4,12). “Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” (Asan’ny Apostoly). 2,21).
Andao hizara ny vaovao tsara
Heveriko fa manaiky daholo ianareo fa tena zava-dehibe amin'ny rehetra ny mandre ny vaovao tsaran'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Tokony ho fantatry ny olona rehetra fa mihavana amin'Andriamanitra izy ireo. Angatahina hamaly izany fampihavanana izany ianao, izay ambara amin'ny fitoriana ny Fanahy Masina ny Tenin'Andriamanitra. Tokony hahatakatra ny olona rehetra fa nasaina handray izay efa nataon'Andriamanitra ho azy ireo izy ireo. Asaina ihany koa izy ireo handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hahafahan'izy ireo miaina amin'ny firaisana manokana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ny olona rehetra dia tokony hianatra fa i Jesosy dia Zanak'Andriamanitra, tonga olombelona. Jesosy dia nanatanteraka ny drafitra mandrakizay. Nomeny antsika ny fitiavany madio sy tsy manam-petra, nanimba ny fahafatesana ary maniry ny hiaraka amintsika miaraka amin'ny fiainana mandrakizay. Ny olombelona rehetra dia mila ny hafatry ny filazantsara satria, araka ny nomarihin'i TF Torrence, tsiambaratelo izany hoe "tokony hahagaga anay kokoa mihoatra noho izay azontsika nofaritana".
Faly fa voavotra ny fahotantsika, namela heloka Andriamanitra ary tena tia antsika mandrakizay.